Suuqgeynta Teknolojiyada: Qaaciddada Apple
Talaado, Janaayo 11, 2011 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Suuqgeynta tikniyoolajiyadda, kana soo horjeedda tikniyoolajiyadda suuqgeynta, waa habka wax soo saarka iyo adeegyada teknolojiyadda loogu meeleeyo macaamiisha mustaqbalka. Maaddaama adduunkeenna iyo nolosheennuba ay khadka tooska ah uga socdaan… qaabka tikniyoolajiyaddu u fiican yihiin, tusaalayaasha hormoodka u ah sida loo calaamadeeyo loona suuq geeyo guud ahaan.
Way adagtahay inaadan ka fikirin suuqgeynta tikniyoolajiyadda adoon lahadlin Apple. Iyagu waa suuqley fantastik ah waxayna qabtaan xitaa shaqo ka fiican sidii ay isugu diyaarin lahaayeen suuq camiran oo ay ku jiraan tan tartan of waxayna sii wadaan inay kasbadaan saamiga suuqa iyo faa'iidada. Muhiim u ah suuqgeynta Apple kama hadlayo kharashyada iyo muuqaalada… laakiin waxay diiradda saarayaan dhagaystayaasha.
Markii aan arko olole suuqgeyn ah oo Apple ah, waxaan aaminsanahay in mid kastaa u burburay fikrado dhawr ah:
xagiisayna - badanaa, olole kasta wuxuu leeyahay hal fariin oo bartilmaameed ah iyo dhagaystayaal… waligoodna kama badna. Sawiradu way fududahay, sidoo kale fariinta. Waa wax iska caadi ah in Apple kaliya yeelato asal cad ama madow black marka waxaad diirada saari kartaa dareenkaaga halka ay jeclaan lahaayeen inay ahaato.
mudnaanta - Tufaaxa Apple waa nooc caan ah oo keena alaabooyin isugu jira xarrago iyo qurux labadaba. Iyagaa kaa dhigaya doonayaa inaad ka mid noqotid cibaadada. La hadal isticmaale kasta oo Apple ah wayna la wadaagi doonaan maalinta ay guureen waligoodna dib uma eegi doonaan.
fili karo - Apple sidoo kale waxay qabataa shaqo weyn oo ah inay ka faa'iideysato maskaxda dadka ay bartilmaameedsanayaan. Markaad aragto olole Apple, waxaad bilaabeysaa inaad ka fikirto waxaad ku abuuri lahayd badeecadooda.
Halkan waxaa ku qoran xayaysiis loogu talagalay Aniga noloshayda (oo aan dhawaan iibsaday):
Tani waa xayeysiin awood leh… halkii diirada la saari lahaa dhibaatada, meeleynta (taas oo Apple ku sameysay Mac oo ka soo horjeedda xayeysiinta PC), ama astaamaha, Apple wuxuu diirada saarayaa dhagaystayaasha. Yaan rabin inuu abuuro fiidiyowyo qaar ka mid ah filimada guriga oo u beddelo agabyo Hollywood-ah?
Mararka qaarkood shirkaduhu waxay ku dhacaan tan iyada oo la adeegsanayo markhaatiyada macaamiisha… laakiin Apple waxay u muuqataa inay xitaa ka fogaato taas. Waxay si fudud u beeraan abuurka… waxayna u oggolaadaan mala-awaalka dhagaystayaasha inay inta kale sameeyaan. Dareen noocee ah ayay shirkaddaada, wax soo saarkaaga ama adeeggaagu geli karaan? Sideed ugu fiicnaan kartaa suuqgeyntaada si aad ugu dhex gasho shucuurtaas?
Tags: suuqgeynta tufaaxaCaanaha suuqgeynta tufaaxaqaaciddada suuqgeyntaka iman karamudnaantaxagiisayna
Otomaatiga emaylka ee WordPress iyo My Ololaha Pro
Dib u eegista SEOmoz Pro Toolset
Waxaan u arkaa dhibaatadan oo kaliya farsamada laakiin inta badan ganacsiyada. Suuq geynta maanta ee ay sameeyeen milkiilayaasha meheradaha ayaa wali loo maleynayaa inay tahay shabaag kalluumeysi iyadoo ganacsatadu ay dirayaan farriin ballaaran iyagoo rajeynaya inay gaarto suuqa saxda ah. Tusaale ahaan waxaan hadda lashaqeeyaa aqal ardayda wax ku bartaan oo suuq u wada dhigta ardayda kulleejyada oo dhan laakiin markii aan cilmi baaris ku sameeyay suuqyada waxaan ogaanay in ka badan 80% dadka degan ay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo dhawaan ka guuray dhismayaal kale oo aqal xumo macaamiil awgeed iyo kharashka kululaynta badan. Waxaan awoodnay inaan dib-u-horumarinno farriinta suuqgeynta iyo dhexdhexaadinta si aan u beegsanno suuqaas. Waxaan ku arkay arintan warshadaha kale sidoo kale. Blog weyn.
Doug - waxaa laga yaabaa inaad ugu dambeyntii igu dhufatay qorista qoraal blog ah oo aan ula jeeday inaan qoro.